Roam SL waa nooca iftiinka ee guushii weyneyd ee ugu dambeysay ee Sonos | Qalabka Wararka
Ku hadasha ugu badan ee Sonos hadda waa la heli karaa si ka badan sidii hore. Sonos ayaa soo bandhigay Socod SL, Hadafka lagama maarmaanka ah ee ultraportable kaas oo si fiican ugu dhawaaqaya guriga oo la qaadi karo meel kasta, hadda oo lagu qiimeeyay qiimo jaban oo aan makarafoon lahayn. Haddii aad la yaabban tahay, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in aysan hadda lahayn Alexa la dhisay. Haddii aad rabto inaad ogaato waxa Sonos Roam awood u leeyahay, ha moogaanin falanqayntayada.
Sida Roam-ka, Roam SL waxa uu bixiyaa cod cajiib ah cabbirkiisa, nolosha batteriga ee maalinta oo dhan, habayn fudud, iyo astaamo cusub oo lagu soo ururiyey qiime sare, waara, iyo naqshad la qaadan karo. Roam SL waxa la heli doonaa laga bilaabo 15ka Maarj qiimo ahaan € 179.
Inkasta oo ay u ekaan karto nooca "fudud" ee Sonos Roam, xaqiiqadu waxay tahay in dhammaan sifooyinka qalabka ka dhigay guusha la ilaaliyo:
Ku raaxayso dhawaaq tafatiran oo hufnaan, qoto dheer iyo buuxnaan laga filayo af-hayeenka weyn.
Ku xidh inta kale ee nidaamka Sonos ee guriga adoo isticmaalaya WiFi, oo si toos ah ugu beddel Bluetooth marka aad maqan tahay.
Stereo-ga ayaa ku lammaan Roam SL-ka Roam SL-ka labaad, ama Sonos Roam iyada oo loo sii marayo WiFi.
Ku wad sahaminta ilaa 10 saacadood oo dib-u-ciyaariis joogto ah hal mar iyo ilaa 10 maalmood oo nolosha batteriga ah markaad ku jirto qaabka hurdada. Si aad nolosha batteriga u sii kordhiso, shid goobta kaydiyaha batteriga si uu afhayeenku gebi ahaanba u damiyo marka aan la isticmaalin.
Roam SL waa mid aan boodhka lahayn oo si buuxda biyuhu aanay biyuhu u lahayn oo leh qiimayn adag oo IP67 ah.
Badhamada taabashada waxay kaa caawinayaan kahortaga cadaadiska shilalka ah markaad socoto.
Qaabkeeda saddex xagal iyo muuqaal wareegsan ayaa Roam SL ka dhigaya mid ku raaxaysan in lagu hayo oo uu si fiican ugu eego gurigaaga gudihiisa.
Roam SL u dhig mid toosan si aad u qaadatid meel ka yar ama u jiifso si aad u siiso xasilooni badan meelaha aan sinnayn ee ka baxsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Roam SL waa nooca khafiifka ah ee Sonos hitkiisii ​​ugu dambeeyay